Usoro igwe ojii | Netwọk Mgbasa Ozi
Usoro igwe ojii
Cumulonimbus: ihe atụ nke igwe ojii convection
Mpụta nke igwe ojii na-esite na ngagharị elu nke ikuku mmiri na-agbasa n'ihi mbelata nrụgide ya na elu ya mere adiabatic jụrụ. Otu akụkụ nke alụlụ mmiri ahụ wee kpụọ urukpuru.
Na mbu anyi kowara njiri mara igwe ojii di iche iche na kwa ka udi ha si buru ihe sitere na usoro nke ibuli ikuku nke bu ihe kpụrụ ha. Variousdị dị iche iche nke vetikal mmegharị nke ahụ nwere ike iduga igwe ojii ka edepụtara n'okpuru:
Ọgba aghara na-arụ ọrụ (ma ọ bụ ọgba aghara esemokwu)
Convection (ma ọ bụ ọgba aghara ọkụ)
Ogologo na nwayọ nwayọ
La n'ibu ọgba aghara ma ọ bụ site na esemokwu ọ na-amalite mgbe ikuku na-eru nso nke elu ụwa na-agbagha site n'ike esemokwu n'usoro nke eddies. A na-enwe ọgba aghara a site na ọnụnọ nke ihe mgbochi (osisi, ụlọ, ugwu, wdg).
Ugbu nke convection Ha na - etolite mgbe ikuku na - ekpo ọkụ na mpaghara nke elu. Na convection ma ọ bụ ọgba aghara ọkụ na-agwakọta ya na igwe ma ọ bụ na-arụ ụka nke ọma iji mee ka agwakọta nke ikuku ala nke ikuku.
na agbago ugwu Ihe na-eme bụ na mgbe ikuku rutere n'ugwu ma ọ bụ ugwu a na-amanye ya ịrị elu ma na akwa ala na ịdị elu. Uzo a na-arị elu na-emetụta akwa miri emi nke ikuku ma na-ekesa ọnọdụ ihu igwe na ya na-agbanwe. Ikuku amanye ịrị elu na-eme ka mgbasawanye adiabatic dị jụụ ma igwe ojii nwere ike ịmalite.
El rịgoro nke ukwuu ndọtị ndọtịỌ na-akpalitekarị na mbido site na ntụgharị dị na troposphere nke elu. Mgbanwe dị iche na ebe dị elu na-eme ka mbelata nke nrụgide dị na mbara ala dị n'akụkụ elu ụwa, na-eme ịda mba. Mgbanwe wee na-ewere ọnọdụ n'akụkụ oke osimiri ma nwayọ nwayọ na mbara elu na-apụta n'elu oke ọkpụrụkpụ nke troposphere na mgbe ahụ, ọ bụrụ na enwere iru mmiri zuru oke, nnukwu igwe ojii na-eme.
Isi mmalite - Compendium nke ndetu maka ọzụzụ nke klaasị IV gbasara ihu igwe », nke BJ dere Ntughari
Ozi ndị ọzọ - Cumulonimbus, Ogo, ịdị elu, akụkụ kwụ ọtọ na ọkwa igwe ojii, Udọn, oyi na sublimation
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Igwe ojii » Usoro igwe ojii